नेकपा एमालेसँग विहीबार औपचारिक रुपमा पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र फुटको संघारमा !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
नेकपा एमालेसँग विहीबार औपचारिक रुपमा पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र फुटको संघारमा !
काठमाडौं – नेकपा एमालेसँग विहीबार औपचारिक रुपमा पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्र फुटको संघारमा पुगेको छ।
माओवादी निकट उच्च स्रोतका अनुसार बहालवाला मन्त्रीसहित ६ सय केन्द्रीय सदस्यले एमालेसँग प्रचण्डले आत्मसमर्पण गरे पार्टी परित्याग गर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्। उनीहरु नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपामा आवद्ध हुने तयारीमा छन् ।
बहालावाला मन्त्रीसहित तत्कालिन ६ सय केन्द्रीय सदस्य रहेको यो क्रान्तिकारी समूहले विप्लवसँग मिलेर नयाँ शिराबाट जनयुद्ध गर्ने तयारी समेत सुरु गरेको छ। यो समूहले एमाले र माओवादी एकता एकाएक भारतको इशारामा हुन लागेको र यो नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको प्रतिफल रहेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।
यो समूह ३ महिना पहिलादेखि विप्लवको सम्पर्कमा रहेको बताइन्छ। ‘उहाँहरुले जुन दिन एकताका नाममा पार्टी एमालेमा विलय हुन्छ त्यही हामी छोडेर जान्छौं भनेर प्रचण्डलाई भन्नुभएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘एकता भोलि हुने निश्चित भइसक्यो। उहाँहरु अलग हुने देखिन्छ ।’
कम्युनिष्ट आन्दोलन सिध्याउनेलाई नछाड्ने उनको रणनीति रहेको बताइन्छ। भारतसँगको १२ बुँदे सम्झौतालाई एकतर्फी रुपमा खारेज गरेर जनयुद्ध क्रान्तिको घोषणा गर्ने तयारी उनको रहेको छ। यसमा उनले माओवादी केन्द्रका असन्तुष्ट समूहको साथ लिन खोजेका छन्। जून एमालेसँग पार्टी एकता हुने वित्तिकै पूरा हुने देखिन्छ ।